सुख्खा पहिरोले दुई हप्तादेखि डोल्पा जोड्ने मुख्य सडक अवरुद्ध ! – Nepalpostkhabar
सुख्खा पहिरोले दुई हप्तादेखि डोल्पा जोड्ने मुख्य सडक अवरुद्ध !
Hemant KC । २२ कार्तिक २०७७, शनिबार १५:०३ मा प्रकाशित
डोल्पा : डोल्पा जोड्ने मुख्य सडकअन्तर्गत पर्ने जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डको खदाङ्ग–त्रिवेणी खण्ड दुई सातासम्म पनि खुल्न सकेको छैन।
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका ५ मा पर्ने कुच्ची भिर नजिकै दुई सय मीटर माथिबाट खसेको भिषण सुक्खा पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको उक्त सडक दुई साता बितिसक्दा समेत खुल्न नसकेको हो।
निरन्तर रुपमा माथिबाट सुक्खा पहिरो खसिरहेकाले सडक खुलाउन निकै समस्या भइरहेको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले जनाएको छ।
पहिरो पन्छाउनका लागि एक सातादेखि दुई वटा डोजर प्रयोग गरिए पनि निरन्तर खसिरहेको पहिरोका कारण सडक खुलाउन नसकिएको वडा नं ६ का सदस्य अमृत सार्कीले जानकारी दिए।
‘लगातार डोजर प्रयोगपछि पहिरो घट्छ,फेरि खसेर जस्ताको तस्तै बनाई दिन्छ,काम गर्न निकै समस्या भएको छ’ सार्कीले भने। पहिरो पन्छाउँदा पन्छाउँदै नगरपालिकाको डोजर आंशिक रुपमा पुरिएको र अर्को डोजर प्रयोग गरि निकालिएको वडा सदस्य सार्कीले बताए।
पहिरो ठूलो भएकाले ज्यानै जोखिममा राखेर काम गर्दा समेते पन्छाउन नसकिएको डोजर चालकको गुनासो छ। सुक्खा पहिरोले सडक आसपासको पचास मिटर सडक पुर्ण रुपमा क्षति पुर्‍याएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाले जनाएको छ।
सामाग्री ढुवानी ठप्प
सुक्खा पहिरोका कारण दुई सातादेखि अवरुद्ध सडक खुल्न नसकेपछि जिल्लामा दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी ठप्प भएको छ।
सडक नखुलेकै कारण दुर्गमका जनतालाई सरकारल् उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियतको चामल समेत ढुवानी रोकिएको खाद्य ब्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी डोल्पाले जनाएको छ।
दैनिक उपभोग्यवस्तु तथा यात्रु बोकेर खदाङ्ग लागि हिँडेका जिप, ट्रयाक्टर लगायतका सवारी साधनहरु बीचपहिरो नजिकै आएर रोकिएको जिप्रका डोल्पाका प्रहरी नायव उपरीक्षक राजु पाण्डेले जानकारी दिए।
शुक्रवार जोखिम मोलेर तीनवटा ट्रयाक्टर र केही गाडी पास भएपनि निर्धक्क आवत–जावत गर्ने अवस्था सडक पुर्ण रुपमा खुलेपछि मात्रै रहने उनले प्रष्ट पारे।
नजिकिँदै गरेको तिहारका लागि आवाश्यक चामल,तेल,माला लगायतका सामानहरु ढुवानीहुन सकेको छैन भने भएको सामानमा व्यापारीले मुल्य बडाएरु बेच्न थालेका छन्। बाटोको कारण बजारमा सामान महंगिन थालेपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन्।
जिल्लामा मानिस आवागमन गर्ने देखि सबै प्रकारका दैनिक उपभोग्य सामाग्रिहरु सस्तोमा ढुवानी गर्ने सजिलो एवं भरपर्दो सडकलाई यथासिघ्र खुलाउन सडक विभागलाई डोल्पालीको माग छ।
अत्यावश्यक कामले आवतजावत गर्ने मानिसहरु ज्यान जोखिममा पारेर पहिरोबाटै हिँड्न बाध्य भएको स्थानीयले बताए। सडक नखुलेर सवारी साधन ठप्प भएपछि सामान ओसार–पसार गरेर दैनिक गुजारा चलाउने मजदुरुहरु सबैभन्दा मारमा परेका छन्। अझै लामोसमय सडक अवरुद्ध भए जिल्लामा खाद्यान्न संकटहुनसक्ने आँकलन समेत गरिएको छ।